UNdunankulu waseFrance uhlaliswe yedwa ngemuva kokuhlolwa ukuthi une-COVID-19
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » France Izindaba Ezintsha » UNdunankulu waseFrance uhlaliswe yedwa ngemuva kokuhlolwa ukuthi une-COVID-19
IBelgium Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • France Izindaba Ezintsha • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
UNdunankulu waseFrance uJean Castex
UJean Castex, osegonywe ngokugcwele, uzohlala yedwa izinsuku eziyi-10 kodwa uzoqhubeka nokusebenza.
UNdunankulu waseFrance, uJean Castex, uhlolwe ukuthi une-COVID-19 ngoMsombuluko ebusuku, ihhovisi lakhe likuqinisekisile.
UCastax, osegonywe ngokugcwele, uzohlala yedwa izinsuku eziyishumi kodwa aqhubeke nokusebenza, kusho ihhovisi lakhe esitatimendeni.
UCasex uhlolwe ukuthi une-coronavirus ngemuva kokubuya ohambweni olusemthethweni lokuya eBelgium.
UNdunankulu wase France uthole ukuthi indodakazi yakhe eneminyaka engu-11 ubudala ihlolwe ukuthi ine-coronavirus ngesikhathi ibuya eBrussels, lapho yahlangana khona UNdunankulu waseBelgium u-Alexander De Croo kanye nabanye abefundisi.
Ongqongqoshe abahlanu baseBelgium, kuhlanganise UNdunankulu uDe Croo, bazivalele yedwa njengesinyathelo sokuzivikela ngemuva kwesimemezelo seCasex, futhi bazohlolwa ngoLwesithathu, kusho okhulumela uhulumeni.
U-Castex, 56, ubengakafaneleki ukuthola imigomo ye-booster UMongameli waseFrance u-Emmanuel Macron usekhulume njengenye indlela yokuvalwa kwemigwaqo esetshenziswa yi-Austria neJalimane ukuphendula isibalo esandayo samacala e-COVID-19 ezwenikazi.
France okwamanje inikeza ama-booster kuphela kulabo abaneminyaka engu-65 nangaphezulu, nakuba indikimba yabeluleki inxuse ukuthi iwadlulisele kunoma ubani oneminyaka engaphezu kuka-40.